I-INTUIT'S MINT.COM YONGEZA UQIKELELO LWEXABISO LEKHAYA LIKAZILLOW KWINDAWO YEZEMALI-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
I-Intuit's Mint.com yongeza uqikelelo lwexabiso lekhaya likaZillow kwindawo yezemali
Intuit's Mint.com website personal-finance wongeze uqikelelo lwexabiso ekhaya ukusuka Seattle real estate ulwazi startup Zillow.com , iinkampani ezimbini zibhengeze ngoLwesithathu.
Mint.com abasebenzisi abongeze iidilesi zabo zasekhaya kwiakhawunti yabo baya kubona uqikelelo lweZillow kwixesha elizayo xa bengena. Abanye banokongeza impahla yabo. Mint.com abasebenzisi banokuyamkela iZillow's Zestimate okanye bangenise ixabiso labo eliqikelelweyo lekhaya.
Oku kuya kunika abasebenzisi beMint umfanekiso opheleleyo wemali ukuze bakwazi ukonga kwaye benze okungakumbi ngemali yabo, Mint.com Umseki uAaron Patzer, ngoku usekela mongameli kunye nomphathi jikelele weqela lezemali lika-Intuit, utshilo kwingxelo. Ngenxa yokuba ikhaya lidla ngokuba yi-asethi enkulu yomntu, kunengqiqo ukuba sidibanise ne-Zillow, ukunceda abasebenzisi bethu balandele i-Zestimate yekhaya labo kwi-akhawunti yabo ye-Mint.
Mint.com yasekwa kwi-2007 kwaye yathengwa kunyaka odlulileyo malunga ne-170 yezigidi zeedola nge-Intuit, umenzi we-Mountain View we-software yemali efana ne-Quicken kunye ne-TurboTax. Indawo inceda abathengi balandele iimali zabo ngokutsala iakhawunti yebhanki, ikhadi letyala kunye nolwazi lotyalo-mali. Abasebenzisi kufuneka babonelele ngolwazi lokungena kwiiakhawunti zabo ukuze basebenzise le nkonzo.
IZillow yasekwa ngo-2006 kwaye ifumene i-87 yezigidi zeerandi kwinkxaso-mali. Ngokutsho kweTechCrunch, abatyali-mali bayo baquka iBenchmark Capital, iTekhnoloji Crossover Ventures, iPAR Capital Management kunye neLegg Mason.
Isitokhwe se-Intuit sivaliwe ngoLwesithathu kwi-45.69 yeedola, phantsi kweesenti ze-14, okanye i-0.3 yepesenti, emva kokuba inkampani iphinde yaqinisekisa ingeniso kunye nengeniso yemali yonyaka we-2011 ngaphambi komhla wotyalo-mali wonyaka.
Inkampani ilindele i-3.74 yeebhiliyoni zeedola ukuya kwi-3.84 yeebhiliyoni zeerandi kwingeniso kwiinyanga ze-12 eziphela ngoJulayi 31, ukuya kwi-8 ukuya kwi-11 ekhulwini ukusuka kunyaka-mali odlulileyo, kunye nengeniso ye-1.88 ye-$ 1.95 isabelo.
Qhagamshelana noFrank Russell kwi-408-920-5876. Mlandele Twitter.com/mercspike .